Al Mukalla - Wikipedia
Magaalo in Hadramaut, YemenTemplate:SHORTDESC:Magaalo in Hadramaut, Yemen
Al Mukalla ( Al Mukallā) waa magaalo ku Yemen. Mukalla (Carabi: Mohkall Al Mukallā) waa dekad iyo magaalada caasimadda ee Jabhadda Hadhramaut ee Yemen. Magaaladu waxay ku taallaa qaybta koonfureed ee Carabta oo ku taal Gacanka Cadmeed, dhinaca xeebaha badda Carabta. Mukalla waa 480 kilomitir oo bariga Aden ah oo ah dekedda ugu muhiimsan ee Hadhramaut, oo ah guddoomiyaha ugu weyn Yemen.
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Mukalla.
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 22 Sebteembar 2018, marka ee eheed 11:50.